ukucupha umuntu wesifazane kulula lapha sizokufundisa ukukhiya indoda sikunike Umuthi wokucupha umfazi ofebayo
isicupho umuthi wokucupha umuntu wesifazane ukucupha indoda
Ucushwa kanjani umuntu wesifazane?
Ukucupha umuntu wakho angalali nabanye abantu, nangu umuthi wokucupha umfazi/ umuntu wesifazane. Udinga imithi emithathu uyihlanganise: umkhamba , uyifa and unukani Qgula lemithi ibe yimpuphu, bese wenza isikalo esifanayo, uyihlanganise, Bese ufaka isipunu esisodwa ku 1 litre, Uma senizohlangana kwinkonzo yasekamelweni, uzophuza u half wenkomishi, usumkhiyile ke angeke esathintwa wumuntu, emva konyaka uzobuye uphinde futhi uvuselele umuthi wakho uwuphinde futhi. Ukukhiya umfazi kubalulekile, kufana nokubiyela umuzi wakho ukuze izigangi zingasondela.
Namhlanje sifundile ukuthi ucushwa kanjani umuntu wesifazane usebenzisa izinduku ezintathu, Umfazi ofebayo uzobonakala ngombala, Uyakwazi yini ukuwusebenzisa ukucupha umuntu wesilisa / indoda lomuthi? Lomuthi wakhelwe ukucupha abantu besifazane, Kuleli page sinayo imithi yokubamba indoda ingafebi, Uma ufuna amaposts ethu kulelipage uzothola imithi eminingi esizayo ekubambeni indoda ingagangi ngaphandle.